8 ม.ค. 2563 - 00:21 น.
အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့အတွက် အမေရိကန်ကို အီရန်မြို့တော် တဟီရန်မှာ ဆန္ဒပြနေကြသူတွေ
အီရန် ထိပ်တန်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကာဆမ် ဆူလေမာနီ အီရတ်မှာ ရောက်နေတုန်း ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် မှာ အမေရိကန်က လေကြောင်းကနေ တိုက်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆူလေမာနီဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက စစ်ဆင်ရေးတွေကို ကွပ်ကဲတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပါ။ သူ့ကို သတ်ဖြတ်လိုက်တာက အမေရိကန်နဲ့ အီရန်ကြား တင်းမာမှုတွေ ပိုတိုးသွားစေတဲ့ မှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒီတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဘီဘီစီ စစ်ရေးနဲ့ သံတမန်ရေး သတင်းထောက် ဂျိုနသန်မားကပ်စ်က ဖြေဆိုထားပါတယ်။
အီရန် တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်က ကာ့ဒစ် အထူးထပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကာဆမ် ဆူလေမာနီ
ဆူလေမာနီကို သတ်ဖြတ်လိုက်တာဟာ အမေရိကန်က အီရန်ကို စစ်ကြေညာတာပဲလို့ တချို့က ယူဆပြောဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ် ပုံကြီးချဲ့တာမျိုးရော လျှော့တွက်တာမျိုးရော မလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒါကနေ ရုတ်တရက် တတိယကမ္ဘာစစ် ချက်ချင်း ထမဖြစ်ပါဘူး။
တတိယမ္ဘာစစ်လိုမျိုး ကြီးကျယ်တဲ့ ပဋိပက္ခကြီးတွေ ဖြစ်လာရင် ပါလာနိုင်မယ့် အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ဥပမာ ရုရှားနဲ့ တရုတ်တို့ အခု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်-အီရန် တိုက်ခိုက်မှု ဇာတ်လမ်းထဲမှာ တိုက်ရိုက် ပါမနေခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အခုဖြစ်ရပ်က အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အမေရိကန်တို့အတွက် အနာဂတ်ကို လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားစေနိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အီရန်ဘက်က ကြီးကြီးမားမား လက်စားချေတာမျိုးကို ကြိုတွက်ထားနိုင်တယ်။
နောက်တော့ ဒါကနေ အမေရိကန်-အီရန်အကြား အပြန်အလှန် လက်စားချေမှု သံသရာထဲ ရောက်သွားစေနိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကနေ နှစ်နိုင်ငံအကြား အဆိုးရွားဆုံး မသင့်မမြတ်မှုကြီး ဆီကိုလည်း တွန်းပို့ကောင်းပို့ လိုက်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အီရန်က လက်တုံ့ပြန်မယ် ပြောထားတဲ့ ပစ်မှတ်တွေက အမေရိကန်တွေရဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပစ်မှတ်တွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်တွေရဲ့ အားနည်းချက်လို့ အီရန်က ယူဆထားတဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ တခြားပစ်မှတ်တွေလည်း ပစ်မှတ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အခုလို သတ်ဖြတ်တာ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ တရားဝင်သလား
အီရတ် ဘဂ္ဂဒက်လေဆိပ်နားမှာ တိုက်ခိုက်ခံရခဲ့
အမေရိကန်ဘက်ကတော့ ဆူလေမာနီဟာ အီရတ်က အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့တွေကို တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက် တာဝန်ယူရမယ့်သူလို့ ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်တပ်တွေက လက်ရှိ အီရတ်အစိုးရ တောင်းဆိုမှုနဲ့ အီရတ်ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆူလေမာနီက အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အများကြီးသတ်ဖို့ အမိန့်ပေးထားတဲ့သူလို့ အမေရိကန်က ယူဆထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အီရန် တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်ရဲ့ သူဦးဆောင်တဲ့ ကာ့ဒ်စ် အထူးတပ်ဖွဲ့ကိုလည်း အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့ အမေရိကန်က ယူဆထားပါတယ်။ ဒီတော့ သူ့ကို သတ်ဖြတ်လိုက်တာဟာ အမေရိကန်ပြောတဲ့ တရားဝင်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆအတိုင်းလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ အမြင်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေပညာရှင်လည်း ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်က နော်တာဒမ် ဥပဒေကျောင်းက ပါမောက္ခ မေရီ အယ်လန် အိုကော်နဲလ်က သူ့ရဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ ယူဆချက်ကို ပြောပြပါတယ်။
"ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြိုတင် ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုပြီး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်တာက ဘယ်တုန်းကမှ ဥပဒေမှာ မရှိပါဘူး။ လုံးဝမရှိပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေက ကုလသမဂ္ဂ သဘောတူညီချက်ပါ။ အဲဒီမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခုခံပိုင်ခွင့်ဆိုတာကို အမှန်တကယ်ဖြစ်တဲ့၊ ထင်ရှားတဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုကို ပြန်ပြီး ခုခံ ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်လို့ပဲ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်" လို့ သူက ပြောပါတယ်။
"အီရန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကာဆမ် ဆူလေမာနီကို အီရတ်မှာ ဒရုန်းနဲ့ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်တာက အမေရိကန်ကို လက်နက်ကိုင်ပြီးလာတိုက်တာကို တုံ့ပြန်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အီရန်က အမေရိကန် အချုပ်အခြာ အာဏာကို လာတိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး"
"ဒီကိစ္စမှာ အမေရိကန်က တရားမဲ့ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ရုံသာမကပါဘူး၊ အီရတ်မြေပေါ်မှာ တရားမဝင်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို လုပ်ခဲ့တာပါ"
အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်ကြဖို့ ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ပြော
ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ သီးခြားအမြင်တွေ ထုတ်ပြောကြတာကလွဲလို့ ကုလ အဖွဲ့ တစ်ခုလုံးရဲ့ အမြင်ကို ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ အဲလို ထုတ်ပြောထားတာလည်း မရှိပါဘူး။
ဥပမာ ကုလ လုံခြုံရေး ကောင်စီရဲ့ အမြင်ဆိုရင် ဘယ်လိုရှိမလဲ။ အမြင်တွေက ကွဲပြားဖို့ပဲ ရှိနိုင်ပြီး အားလုံး သဘောတူတဲ့ အမြင်တစ်ခု ရောက်ဖို့က မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူတာရက်ကတော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ တင်းမာမှုတွေ မြင့်တက်လာတာကို အများကြီး စိုးရိမ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"အခု အချိန်က ခေါင်းဆောင်တွေ အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ကြရမယ့် အချိန်ပါ။ ကမ္ဘာကြီးမှာ နောက်ထပ် ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲ အဖြစ်မခံနိုင်တော့ပါဘူး" လို့ ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရ ဖာရန် ဟက်က ထုတ်ပြန်ပြောကြားပါတယ်။
ထရမ့် ရာထူးက ပြုတ်ကျအောင် စွပ်စွဲပြစ်တင်ခံရတာကို လမ်းလွှဲတာလား
ဒီတိုက်ခိုက်မှုက စစ်ပွဲတွေရပ်အောင်လုပ်တာ စစ်ပွဲကိုစတာ မဟုတ်လို့ပြောတဲ့ ထရမ့်
ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးက အမြဲတမ်း အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာ ရှိနေတာဆိုတော့ အဲဒီလိုမျိုး ယူဆတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ထရမ့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲရှိတဲ့ နှစ်လည်း ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီလို တိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တာဟာ အချက်နှစ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခွင့်အရေးနဲ့ အခြေအနေအရ လုပ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အခြေအနေတွေက အီရတ်မှာ ရှိတဲ့ အမေရိကန်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေ တိုက်ခိုက်ခံရတယ်။ နောက်ထပ်လည်း တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ခြေတွေရှိတယ်ဆိုပြီး အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း မှန်းချက်တွေထုတ်ထားတာတွေလည်း ရှိနေတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်မှာ အမေရိကန် သမ္မတ ထရမ့် အဓိကထား စဉ်းစားမှာက အမေရိကန်တွေ အရှေ့အလယ်ပိုင်း အသက် ဆုံးရှုံးရတာမျိုးကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ဖြစ်တယ်။
အီရန်က နျူကလီးယားတိုက်ခိုက်မှုတွေ တုံ့ပြန်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်မျိုးရှိလား
ပိတ်ပင်ကန့်သတက်မှုတွေ ဆက်လုပ်ရင် နျူစမ်းသပ်မှုတွေ ပြန်စမယ်လို့ အီရန်ဘက်က ခြိမ်းခြောက်
မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အီရန်မှာ အဲဒီလိုမျိုး နျူကလီးယားလက်နက် မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နျူလက်နက်ထုတ်နိုင်မယ့် ရင်းမြစ်မျိုးတွေနဲ့ နည်းပညာတချို့တော့ အီရန်လက်ထက်မှာ ရှိနေပါတယ်။
အီရန်က နျူကလီးယားဗုံး မလိုချင်ဘူးလို့ အမြဲတမ်း အခိုင်အမာ ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၅ နျူကန့်သတ်ချက် သဘောတူညီချက် အရ ကန့်သတ်ထားတဲ့ ဘယ်အချက်ကိုမှ ဆက်ပြီးလိုက်နာတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အီရန်က ကြေညာလိုက်ပါပြီ။
ဒီကြေညာချက်ဟာ အီရန် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအပြီး ထွက်လာတာပါ။
ထရမ့်အစိုးရ အီရန်နဲ့ သဘောတူထားတဲ့ နျူသဘောတူချက်ကို ဒီတိုက်ခိုက်မှုမတိုက်ခင်ကတည်းက စွန့်လွှတ်ထားပြီးပါပြီ။ နိုင်ငံရေး လေ့လာသူ အတော်များများကတော့ ဒါက မဆင်မခြင် လုပ်တာလို့ ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။
ဆူလေမာနီက အီရတ်မှာ ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲ။ အီရတ်အစိုးရ ဘာပြောလဲ
အိုင်အက်စ် ချေမှုန်းရေး စစ်ဆင်ရေးလုပ်စဉ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက ကာဆမ် ဆူလေမာနီ(ဘယ်)
အီရန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အီရတ်မှာ ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာ သိပ်တော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အီရတ်မှာ ရှိတဲ့ သြဇာရှိတဲ့ ရှီးယား လက်နက်ကိုင်အတော်များများကို အီရန်က အထောက်အပံ့တွေပေးတယ်။ သူနဲ့အတူ တိုက်ခိုက်ခံရပြီး သေဆုံးခဲ့သူ တစ်ဦးက အဲဒီ ရှီးယား စစ်သွေးကြွ ကတိဘ် ဟဇ်ဘိုလာ အဖွဲ့က ခေါင်းဆောင် ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအဖွဲ့က အမေရိကန် စစ်အခြေစိုက် စခန်းတွေကို လက်တလော တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ အဖွဲ့လို့ ဆိုတယ်။ ပြီးတော့ အီရတ်မှာ ရှိတဲ့ အီရန်ထောက်ခံတဲ့ ညွန့်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဒုတိယ စစ်ခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်တယ်။
ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အီရတ် အစိုးရကတော့ အနေရခက်တဲ့ အဖြစ်မျိုးကို ရောက်သွားတယ်။ အထူးသဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုက သူတို့မြေပေါ်မှာ ဖြစ်ခဲ့အတွက်ပေါ့။ သူက အမေရိကန်ရော အီရန်နဲ့ရော မဟာမိတ်ဖြစ်တယ်။ အီရတ်နိုင်ငံထဲမှာ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့တွေ ထောင်နဲ့ချီရှိနေသေးတယ်။ အီရတ်က အိုင်အက်စ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်ရာမှာ အဲဒီတပ်ဖွဲ့တွေက ကူညီဖို့ရောက်နေတာ ဖြစ်တယ်။
ပြီးတော့ အီရတ်မှာ ရှိတဲ့ အမေရိကန် အခြေစိုက်စခန်း တိုက်ခိုက်ခံရကတည်းကလည်း အီရတ် အာဏာပိုင်တွေ မျက်နှာပူစရာ ဖြစ်နေခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
အီရတ် ဝန်ကြီးချုပ်က အခုလို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို တိုက်ခိုက်တာကို ရှုတ်ချထားတယ်။ သူရယ် သူနဲ့အတူ သေဆုံးသွားတဲ့ စစ်သွေးကြွခေါင်းဆောင်ရယ်ကို အိုင်အက်စ်တွေကို တိုက်ခိုက်နှိမ်းနင်းခဲ့တဲ့ အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေလို့လည်း ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲထားတယ်။
ပြီးတော့ အီရတ်မြေမှာ ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်မယ်ဆိုတာ သဘောတူထားတာထက် အမေရိကန်က အများကြီး ကျော်လွန် လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုပြီး အီရတ် အစိုးရက အခိုင်အမာ ပြောထားတယ်။
အမေရိကန်၊ အီရန်၊ အီရတ် ပတ်သက်မှုက ဘာလဲ
သေဆုံးသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာ အီရန်ခေါင်းဆောင် အယာတိုလာ အလီခါမေနီ (ဘယ်) ပြီးရင် ဒုတိယ သြဇာအရှိဆုံးလို့ ယူဆထားကြပါတယ်။
အီရန်က ရှီးယားတွေ ခေါင်းဆောင်တဲ့ အီရတ် အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ အီရတ်ထဲက ရှီးယား စစ်သွေးကြွတွေနဲ့ ပေါင်းပြီးလည်း အီရတ်နိုင်ငံထဲမှာ ဝင်ပြီးလှုပ်ရှားနေတယ်။
အမေရိကန်ကတော့ အီရတ်မှာ တပ်ဖွဲ့ဝင် ငါးထောင်လောက် ပို့ထားတယ်။ အိုင်အက်စ် အကြမ်းဖက်တွေကို တိုက်ဖို့ အီရတ် တပ်ဖွဲ့တွေကို လေ့ကျင့် သင်တန်းပေးတာ ကြီကြပ်ကွပ်ကဲပေးတာ တွေ လုပ်နေတယ်.
အဲဒီ နှစ်နိုင်ငံက အီရတ်ထဲမှာ အပြိုင် စစ်ကစားနေကျတာ ဖြစ်တယ်။
ဒီလို အခြေအနေမှာ အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုက အီရတ်ကို မထိပါးစေဘဲ အမေရိကန်တွေ အီရတ်ထဲမှာ ဆက်ရှိနေနိုင်မလား ဆိုတာပါပဲ။
อัลบั้มภาพ တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ဖို့ နီးစပ်လာသလား